I-Ipad 2, ngokwembono yethu-iGeofumadas
Ikhaya/Apple - Mac/I-2 Ipad, Ukususela kumbono wethu
Apple - MacArcGIS-ESRIAutoCAD-AutoDeskezintshaMicrostation-Bentley
I-2 Ipad, Ukususela kumbono wethu
Izolo ibilusuku olumnandi kakhulu kubalandeli beetekhnoloji zeApple, ikakhulu abakhoyo ngoku kunye nabakhoyo kwiipilisi ze-Ipad. Nangona amagama aphambili namhlanje egcwalisa iinjini zokukhangela ngesihloko zibuza malunga nokugxekwa kwe-iPad 2, ukuba kufanelekile ukuyithenga ngoku, ukuba unokuhlaziya i-iPad 1 kunye neendaba eziziswe sisizukulwana sesibini se-Ipads; Ndifuna ukugxila kwisifundo esihlalutya ngakumbi sombono wam esihambelana ngakumbi nekomityi emnandi yekofu ye-mocha enesiqingatha se-amaretto.
Steve Jobs, ingqiqo emva kwePad 2
Izolo Ndandinomdla ukulandela lo mbandela, emva kokukhangela kwimithombo yeendaba emininzi engakhange igqithe kulumkiso lwentelekelelo, ndaye ndagqibela ngokuya kuTwitter, apho umzuzu ngamnye ndandibona khona into enikezelwayo kwintetho; Usasazo lwasasazo oludumileyo landikhokelela ekubambeni umbungu ebendinzima ekususeni kwiNetbook. Ekugqibeleni ndabona ukuphononongwa ngokusesikweni kwimithombo yeendaba ezinempembelelo kwaye ezinzulwini zobusuku ividiyo ye-HD eyathunyelwa ngu-Apple kwiphepha labo.
Inqanaba lokuthengisa, ngokwenene isiqendu esikhulu, ukusuka ekuvukeni kwendlela eya kuba ngayo, ukulindela, kunye nomcimbi ngokwawo wonke umboniso.
Ubungqondi obusemva koku isenguSteve Jobs, othe nangona ethathe umhlala-phantsi kwezempilo wazingqina eyinkokeli enesisa kwesi sigaba sitsha seApple. Ayisiyiyo into yokuba le ndoda ine charisma enkulu, ukugxeka kwayo, ukuzikhukhumalisa kunye nokuhlekisa kwabo bakhuphisana nabo kungathathelwa ingqalelo ngabantu abaninzi njengokuziphatha kakubi; kodwa uyenza kakuhle kwaye ngokwendalo kangangokuba side sigqibe ukonwabela umzuzu.
Indoda ibonakalisile ukuba inobomi obungaphezulu kobunye, ukumbona esiya eqongeni, into ebhityileyo kodwa enoburharha obufanayo iyancomeka. Ngokuqinisekileyo uyindoda efumene ukugxekwa okuninzi, eyongezwe ekufuneka izise esikolweni sayo njengeklasikhi "nerd", Engatshintshi kakhulu kwindlela yakhe yokunxiba" engafanelekanga ". Kodwa akukho mntu unokwenza okuninzi ukugxeka enye yeempawu zeSilicon Valley, umzekelo ongenakuphikiswa wokuba kuthetha ukuthini ukuba nobukrelekrele kwaye ukwenze oko ngoluhlobo. Sele sinqwenela ukuba sibe liqabane ubuncinci kwelinye lamalungelo awodwa abenzi bamabhaso angama-230.
Ngoko, phakathi kokuPhumelela kweMisebenzi kunye nokuthembeka kwe-Apple, oku ngoku yonke indawo kunye neendawo zayo zokugcina ezimhlophe, kubonakala ngathi iPad 2 iya kwamkelwa kakuhle.
Ubungakanani bePad 2
Ithebhulethi ngokuqinisekileyo iza kuba nkulu ngo-2011. Kunyaka nje odlulileyo bekukho iikhathuni ezininzi, zihlekisa ngemisebenzi ebonisa “I-iphone 4 kwi-1", Babefana naso Roseta Stone yaseYiputa, babuza ubukhulu bayo, ukuba bekungenayo i-USB, ukuba ayinayo ikhamera, ukuba ayizange ixhase i-flash, nokuba kunjalo.
Kodwa emva konyaka, izigidi ezili-14 zezo zinto zathengiswa. Abakhuphiswano benze amaqela angcono, kodwa akukho mntu ukwazileyo ukuthengisa uninzi ukuseta iintsingiselo okanye ebe ipesenti enkulu. Esi sizathu sikhokelela kwimisebenzi ukuba ingabuzisi into ecocekileyo kwindawo ye-USB, ukuba usiba lwedijithali aluyomfuneko ... .
Ngoku, inguqulelo iphehlelelwe ukuba ngokulula iprosesa yeCore Duo eyenzileyo, yenze ukuba amehlo abaphuhlisi akhanye. Kude kube ngoku, xa kusenziwa izicelo, uninzi lwazo lusisiseko, i-Ipad yayisetyenziselwa iindlela ezilula, ezimbalwa zaye zabalasela kakhulu, kodwa kubandakanya ezasimahla zaba sisixa esimangalisayo sama-63,000 esilungele ukukhutshelwa. Ngokuqinisekileyo, ngoku ndicinga njalo, siya kuba nayo AutoCAD WS njengoko ikwinguqulelo yewebhu, ingcono kwaye isimahla (ndiyathemba). Ngapha koko, andiyithandabuzi into yokuba i-ESRI sele icinga ngento enkulu kungekuphela ngeArcPad, kunye neBentley, ngokuqinisekileyo iya kunika ithuba elihle kumzekelo wokuqala kunyaka ophelileyo endinokufumana ngawo izandla eAmsterdam.
Olunye uphuculo luzisa isibheno kulo kwizicelo, ezinje ngeekhamera ezimbini kunye ne-gyroscope, endicinga ukuba singenza imimangaliso kumxholo we-geospatial. Ngoku i-GPS iya kuba nakho ukudibanisa ikhampasi kunye nekhamera ngaxeshanye, ezinokubakho ukuba i-photogrammetry kunye neetekhnoloji zeLidar ziya kuba nakho ukusebenzisa le processor. Izicelo ezitsha ezibonisiweyo kukucela nje umngeni kubaphuhlisi, umculo kunye nokuhlelwa kwevidiyo ngeminwe yakho, ngokusebenza okumangalisayo kweprosesa, banomtsalane ngokuqinisekileyo ukuba sele bephakamisile ukukhala kwimizi-mveliso yoyilo.
Ezinye utshintsho ubukhazikhazi nje, isiciko nomgangatho woposo ye ezimhlophe, nto leyo ngoku lula, imibala ngaphezulu ... na isinyanzelo nje isimo Apple ngenxa yokwenza izinto nje kuphela ukusebenza kakuhle kodwa, khangela kwakhona intle.
Lo ngumba ophambili, ubuthathaka ngokwenene. U-Apple uthathe isigqibo, kwaye andicingi ukuba siyakutshintsha ekuhambeni kwexesha, ukuphepha inkxaso ye-flash kwiipilisi ze-iPad. Umlilo onqamlezileyo ubukwinqanaba eliphezulu phakathi kwamabini amakhulu kakhulu.
Ingxaki koku sisiphumo sokugqibela. Omnye kwaba babini uya kugqibela ukonakaliswa kakubi. Ngokoluvo lwam, oyithathayo ekuphulukaneni neAdobe ngezi zizathu zilandelayo:
KwiAdobe, iflash ngumgca obaluleke kakhulu. Wathenga iMacromedia ukuba abulale abo bakhuphisana nabo kwi-Illustrator (Freehand) kunye neFotohop (Fireworks), kodwa indibaniselwano ayenzileyo phakathi kweDreamweaver kunye neFlash kwiAdobe Air sisihloko abacinge nzulu ngaso kwaye onke amandla eAdobe aguquka kwi ulawulo lomxholo kwi-Intanethi.
Okwangoku, iApple yinkampani ene-quirk yayo, yasinda njengesixhobo se-elite iminyaka emininzi. Ufumene kwaye ufumana imali eninzi ngento ayenzayo, ke ngekhe anikezele ngengalo yakhe ukuba ijijwe ngabathwali bezinto eziphilayo. Ukongeza, kukhokelela ekubekweni kwabasebenzisi abanxibelelana ngeefowuni eziphathwayo.
Namhlanje iindaba ziye zasasaza ukuba uWalt Disney uthenge i-Rocket Pack, ephethe le njongo, lahla ukuxhomekeka kwakho kwi-flash kwaye kwangaxeshanye wenze isicelo ngaphandle kweVenkile yeApple. Ke siza kuba nonyaka ombi, iAdobe isebenzisana nezinye iigrafti ezenza iitafile kunye nesoftware ethandwayo; I-Apple ngokuthanda kwayo, isebenzisa indawo yayo kunye nabo bonke abasebenzisi abanokubalinda ukuba bathathe isigqibo sokuba iifama zeenkukhu zeFarmVille ziya kukwazi ukukhula kwi-iPad 2.
Unyaka omnandi wethebhulethi. Kanye njengokuba iiNetbooks zazimalunga nesithathu ezidlulileyo. Ukuba kukho nayiphi na inzuzo koku, kukwazi ukuba yonke imihla ukuthengisa ngakumbi kuyajika ku-Apple, ukuba umntu unokuyikhusela ngesitayile kunye nesilivere. Ngokuqinisekileyo ukuba ifikelela kwindawo ephezulu kwintengiso, amaxabiso ayo aya kwehla kwaye izicelo ziya kuphinda-phinda, nto leyo ekugqibeleni esihlala kuyo.
Kuthekani ukuba kulungile ukuthenga iPad 2?
Ewe, ukuba unayo imali, ukuthenga enye ye-64 GB kanye, kuba akukho phuculo.
Ewe, ukuba sele sele uzimisele ukuthenga enye, ke inenani elifanayo.
Ewe, kuba iya kuba yinto efanayo kulo nyaka.
Ewe, ukuba uyayinyamekela ngokukhawuleza kwaye uthathe inzuzo yokuba ungathethi iimbambo, imouse, i-backpack kwaye, ukuba sicinga ukuba unxibelelwano lugalelo ekuveliseni ngakumbi -zesilivere kwaye kungekhona nje.
Yintoni eqinisekileyo kukuba ayinakuqonda ukuba uthenge i-Ipad 1, ezayo kule nyanga iya kuqala ukuthengiswa njengabaxhasi abo bahlawula ngaphantsi.
Okwangoku, sisuka kwilizwe lehlabathi, silinde i-AutoCAD WS, i-ArcPAD ye-Ipad kunye neProjekthi ye-Wise Navigator ukusiphoqa ukuba sinqume i-Ipad 2.
Hayi, andinayo i-iPad yam ukuthengiswa, okwangoku.
Ukulinda i-Ipad 2
Kudala ngoku, umsi weminyaka eyi-10,000 XNUMX
Ndiyabulela i-javi yedatha.
Xa ikhibhodi yepad ifakwa phakathi kwesikrini unokuyikhuphela ngokucinezela iqhosha lasekunene uze ucinezela ukulungiswa kwaye ulungile.
Izixhobo zophuhliso zeCadCorp